Shiinaha Warshadda Neefsashada la tuuro iyo alaableyda | Biotek
Wareegyada neefsashada waxay bukaanka ku xiraan mashiinka suuxinta. Naqshado badan oo wareegyo kala duwan ah ayaa la soo saaray, mid walbana leh heerar kala duwan oo hufnaan, habboonaan, iyo kakanaansho ah
Xeerka alaabta: BOT124000
loo isticmaalay dawada suuxdinta, mashiinka neefsashada, aaladda qoyaanka, iyo atomizer, si loo sameeyo marin neefsasho ah oo loogu talagalay bukaannada.
Model: guud jiingado, ballaadhin, simbiriirixan, wada-axial iyo laba-addin
1. Jilicsan, jilicsan oo hawo adag leh;
2. Dhammaan dhererka iyo moodeellada la heli karo;
3. Cabbirro buuxa oo isku xirayaasha iyo tuubooyinka dheereynta oo la heli karo;
4. Ku habboon neefsashada iyo mashiinka suuxdinta oo leh summad kala duwan.
Circuit Neefsashada Suuxdinta
1. Culeysku wuxuu ka yaryahay wareegga laba-lugood, wuxuu yareeyaa culeyska marin-haweedka bukaanka.
2. Iyada oo leh hal addin, waxay bixisaa kala duwanaansho badan marka loo isticmaalo wareegga wareegga iyo OR.
3. Xidhiidhiyayaasha caadiga ah (15mm, 22mm).
4. Ka samaysan maadada EVA, oo aad u jilicsan; khadka muunad qaadista gaaska waxaa lagu dhejin karaa banaanka wareegga. Tayo sare leh.
5. Habee tilmaamahaaga: Wareegyadayada neefsashada waxaa lagu qaabeyn karaa dherer badan, waxaana lagu qalabeyn karaa Dabinka Biyaha,
Bacda Neefsashada (latex ama latex-free), Filter, HMEF, Kateetarka Mount ama Suuxdinta Maska, iwm. Haddii aad leedahay shuruudo gaar ah,
fadlan nala soo xiriir.
Hore: Maaskaro Sayniska Suuxdinta Dheddigga Dheddigga ah ee Iib ah
Xiga: Maskaxda Laryngeal Mask (Silicone)